Mpanoratra malagasy - Fady, malagasy, Aprily, Aina Nirina, R
ⓘ Mpanoratra malagasy - Fady, malagasy, Aprily, Aina Nirina, Régis Rajemisa Raolison, Tantarani Madagasikara, Jean-Joseph Rabearivelo, Niry Solosoa, Ny Eja ..
Ny fady na faly, eo amin’ny kolontsaina malagasy, dia ireo zavatra raràna tsy azo tanterahina araka ny fepetra napetraky ny fomba amam-panao. Mety hisy fady momba azy ny olona na ny toerana na ny asa atao na ny zavatra iray ka miovaova isam-paritra eto Madagasikara izany. Araka ny finoana dia vokatry ny hery tsy hita maso sady mifandray amin’ny fivavahana aminny razana ny fady. Na dia misy ny fady iraisanny Malagasy rehetra dia misy ny fady tsy mahakasika afa-tsy ny faritra na ny tanàna na ny fianakaviana sasany ihany. Isan’ny maha malagasy ny Malagasy ny fananana fady sady mandray anjara ...
Teraka taminny 4 Martsa 1901 tao Isoraka, Antananarivo i Joseph-Casimir Rabe Antsa, zanaky Rabozivelo, Zanadralambo, avy ao Ambatofotsy - avaratrAntananarivo. Efa taona maro taty aoriana no nanova anarana hoe Jean-Joseph Rabearivelo i Joseph-Casimir. Nanomboka taminny taona 1908 dia ny anadahin-dreniny no niantoka sy nitaiza an-dRabearivelo. Nianatra tao aminny Frères des Écoles Chrétiennes Andohalo izy, avy eo tao aminny sekoly Masin-dahy Misely ao Amparibe, ary rehefa voaroaka tao dia nifindra tao aminny sekoly Falcourt Faravohitra. Teo aminny faha-13 taonany izy nandao ny fianarana sain ...
RASOLOMAHENINA Manirisoa, izay fantatra aminny solonanarana Niry Solosoa dia teraka ny: 26 jolay 1951 tao Ihosy. Mpanao gazety izy ary manoratra tononkalo, famoaboasan-kevitra sy sombintantara.
Ny Eja, na Solonomenjanahary Ranivoarisoa Eugénie dia mpanakanto vao misondrotra eo aminny sehatry ny literatiora. Ny Eja dia midika ny haingo sy ny hatsarana Mpanoratra ny raibeny: Itompokolahy Rakoto Paul. Tia manao sary sy maka sary ary manoratra koa ny rainy, Itompokolahy Rakoto Léonard. Mpanoratra tononkalo sy hira mbola hirainny tily ny anadahin-dreniny, Max Géo Lili, sady sakaizani Dox fony fahavelony. Tany Antsiranana no nanombohani Ny Eja ny sekoly, izay notohizany teny aminny sekoly Maria Mpanampy tao Antananarivo. Nandia ny sekoly ambaratonga manokana teny Ampefiloha izy talohan ...
RABEMANANJARA Jacques dia teraka tao Mangabe, Maroantsetra ny 13 Jiona 1913. Nodimandry ny 2 Aprily 2005 tao Frantsa taminny faha-92 taonany. Nolehibiazina taminny finoana katolika izy, ary nanohy fianarana teny aminny Sekoly ambony mpanomana ho pretra tao Antananarivo raha nihevitra hanolo-tena ho pretra ny taona 1927-1935. Niova làlana anefa izy ka lasa nirona tany aminny asa birao. Ny taona 1935 no nanombohany nirona betsaka taminny politika sy ny literatiora. Ny taona 1939 izy dia nalefa nisolo tena ani Madagasikara taminny fankalazana ny Revolisiona Frantsay tany Parisy. Noho ny ady m ...
Solofo José, izay Rakotosolofo Joseph no tena anarany dia mpanoratra sy mpilalao tantara malagasy. Nisongadina taminny filalaovana tantara aminny onjam-peo. Anisanireo namorona ny fikambanana poeta sy mpanoratra Faribolana Sandratra.
Teny malagasy ofisialy
Teny malagasy ofisialy dia endriky ny fiteny malagasy natao hifandraisanny faritra rehetra eto Madagasikara. Izy io dia teny manana ny maha izy azy ary tena manan-danja, ka ny mpanoratra, ny mpikabary sns no tena mpampiasa azy io, ary ny ankamaroanireo boky natonta hatraminizay dia aminny teny malagasy ofisialy avokoa.
Ilay Zazavavindrano kely
Den lille havfrue dia kohateninanganonny mpanoratra danoà Hans Christian Andersen izay nivoaka taminny taona 1837.